City Stay waa ​urur aan faa’iido doon ahayn oo isku xiraya bulshooyin aan isku dhaqan ahayan iyadoo la adeegsanayo khibrad wax barasho.
​​City Stay waxay dhaqan galinaysaa hab cusub oo waxbarashada iyo dhismaha bulshada ku salaysan​
​Waxay keenaysaa fikaradda wax barasho dibadda ah oo la keenay gudaha, taasoo u oggolaanaysaa dadka reer Minnesota ee ay kala duwanyihiin dhaqankooda, midabkooda iyo diintooda in ay la noo laadaan qoys cusub oo reer Minnesota ah oo leh dhaqan gooni ah.
Ka qayb galayaashu waxay sii wadan karaan dhismaha xiriirka dhaqan ee kala duwan iyo xirafaddooda luqadda marka barnaamijku dhammaado kaddib.
​​Guud ahaan, xiriirka ay fududeynayso City Stay wuxuu yaraynayaa is aaminaad darrada iyo sinnaan la’aanta bulshooyinka ku nool magaalooyinka Mataanaha ah.
​Xiriiradan waxay u adeegayaan sidii loo dhisi lahaa bulsho wacyi qabta oo isku xiran taasoo kobcisa fahamka dhaqamada kala duwan ee adduunka ka jira.​
​​Barnaamijkeennu wuxuu socdaa muddo hal asbuuc ah, waxaana ka qayb gali kara ardeyda dugsiyada sare, ardeyda jaamacadaha iyo dadka waaweyn ee xirfadlayaasha ah.
​Inta lagu jiro maalintii, ka qayb galayaashu ​waxay ka qayb qaataan wada hadallo wax tar leh oo ay soo jeediyaan dad ka soo jeeda bulshooyinka dalkan u soo guuray ee deggan Minnesota. ​​
Mawduucyada waxaa ka mid ah, waxbarashada magaalooyinka , socdaalka iyo dhaqamada ee Ma​gaalooyinka Mataanaha ah . Habeenkii​, ka qayb galayaashu waxay la noolaadaan qoys deegaanka ah oo ka soo jeeda dhaqan kale.
​​Muhiimadda barnaamijkan waa qaybta guri la joogista reer kale. Ka qayb galayaasha barnaamijkan oo ka soo kala jeeda bulshooyinka Latino, Soomaalida iyo Hmong waxay dhiseen hoggaamin macne iyo xog siin xambaarsan oo si taxaddar leh looga soo dhex xushay bulshooyinkaas.
Intaa waxaa dheer barnaamijkan ​in City Stay ​sidoo kale ay bixiso tababarro gacan ka gaysanaya kor u qaadista dhaqan ee bulshooyinka ugu ballaaran ee u soo guuray Minnesota. waxaan inta badan u adeegnaa barayaasha, howlaha dadweynaha wax loogu qabto, xirfadlayaasha caafimaadka, hoggaamiyeyaasha diinta iyo ardeyda.
City Stay waxay bixisaa aqoon tijaabo ah, taasoo ka gudubta caqabado iskuna xirta bulshooyinka dhaqammada kala duwan ee ku nool Magaalooyinka Mataanaha ah.
In xiriir micne leh oo waara laga dhex sameeyo dad dhaqammo kala duwan leh.
​In loo diyaariyo jiilka soo socda in ay ku noolaadaan adduun dhaqammo kala duwan leh
​In lala wadaago dhaqammada taajirka ah dadka cusub ee reer Minnesota iyadoo la gaarsiinayo dad badan.
​In la dhimo is aammin darrada iyo sinnaan la’aanta iyadoo la fududeynayo wada hadal, wax barasho iyo ficil
“Sida la hubo way ka badantahay wixii aan filayay! Aad loo qorsheeyay, xiriiro badan la leh hoggaamiyeyaal cusub iyo waxyaabo kale. Tani waxay wax ka baddashay nolosheyda shaqsi ahaaneed iyo midda xifaddayda.
“[City Stay] waxay ii furtay dhaqammo cusub oo aanan horey u arkin. Waxay I bartay habab cusub oo nolosha ah, dhaqan, iyo diin. Waayo aragnimadaydii ugu qiimaha badnayd waxay ahayd la joogistaydii qoys Soomaali ah. Aad baan ugu faraxsanahay in aan ka qayb qaatay barnaamijkan City Stay, waxaan ku bartay dad wanaagsan.
“[City Stay] aad bey u wanagasantahay. Waxaan ka helay habka ay kaaga soo saarayso xayndaabkaaga iyadoo si toos ah kuugu xiraysa dad aadan inta badan la kumli lahayn. Qoskaygii reer Hmong ahaa wuxuu ahaa qoys deeqsi ah oo aad u wanaagsan.Waxaan rabaa in aan xiriir dheer oo waara la samaysto. [City Stay] waa mid ka mid ah waayo aragnimadayda aan ka guuri doonin xasuustayda. Waxaan ka helay waayo aragnimo dadka reer Minnesota hal asbuuc gudihiis taas oo aanan helin muddadii halka sano iyo barka ahayd ee aan ku noolaa Minnesota…”
“Wax xiriir ah haba yaraatee lama yeelan dadka dhaammadaan leh ee aan wax ka barannay. Gabi ahaamba waxaan ka ahaa jaahil dhaqammada magaalooyinka mataanaha ah laakiin hadda waxaan ka haystaa faham dadka halkaan ku nool. Waad ku mahadsantihiin sare u qaadista fahamkayga magaalooyinka mataanaha.